Makhaya Ntini steps down as Zimbabwe bowling coach - Sportstar
Former South Africa pacer Makhaya Ntini has resigned from his role as Zimbabwe’s bowling coach. The Zimbabwe Cricket (ZC), in an official statement, confirmed the news.
Harare 07 January, 2018 21:13 IST
Ntini, 40, who played 101 Tests for the Proteas, has held the responsibility of bowling coach since January 2016 for a term of two years but has now resigned ahead of a busy year for South Africa. - The Hindu
Former South Africa pacer Makhaya Ntini has resigned from his role as Zimbabwe’s bowling coach. The Zimbabwe Cricket (ZC), in an official statement, confirmed the news. "It is with regret that Zimbabwe Cricket (ZC) announces that Makhaya Ntini, the National Team Bowling Coach, has tendered his resignation from ZC, with immediate effect”, it read.
Ntini, 40, who played 101 Tests for the Proteas, has held the responsibility of bowling coach since January 2016 for a term of two years but has now resigned ahead of a busy year for South Africa.